Itoobiya, Suudaan, Masar waxay gaareen isfaham ku saabsan biyo-xireenka Nile – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Itoobiya, Suudaan, Masar waxay gaareen isfaham ku saabsan biyo-xireenka Nile
Itoobiya, Suudaan, Masar waxay gaareen isfaham ku saabsan biyo-xireenka Nile
In kasta oo ay jirto rajo xumada Masar ee ku saabsan wadahadaladii ugu dambeeyay ee ku saabsan $ 5bilyan oo biyo-xireenka ah ee ay ka dhiseyso wabiga Niil, Itoobiya ayaa sheegtay axadii in is faham laga gaadhay dhameystirka iyo howlgalka biyo xireenka.
Baaqa ayaa ku soo baxay bayaan ay soo saartay Wasaaradda Biyaha, Waraabka iyo Tamarta ee Itoobiya kadib markii Suudaan, Itoobiya iyo Masar goor dambe oo Sabtidii ah ay yeesheen wadahadalkoodii afaraad oo ku saabsan dhammaystirka heerka koowaad iyo hawlgalka sannadlaha ah ee Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).
Iyada oo ku saleysan jadwalka buuxinta ee GERD, waddamadu waxay gaareen faham ku saabsan tilmaamaha loogu talagalay buuxinta marxaladda koowaad, mugga socodka deegaanka, iyo habka loo maro xeerarka maaraynta abaarta.
Wadamadu waxay sidoo kale gaareen faham ku saabsan xeerarka amniga biyo-xireenka, daraasadaha qiimeynta bey’adda iyo bulshada, iyo hirgelinta tilmaamaha iyo xeerarka.
Sabtidii, afayeenka dawlada Masar ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Qaahira in dawladiisu aysan u arag wax horumar ah oo laga gaadhay wadahadalka.
Wasaaradda Biyaha, Waraabinta iyo Tamarta ee Itoobiya qoraalkeeda, si kastaba ha noqotee, waxay ku boorrisay Masar inay joojiso inay soo saarto hadalada jahwareerka ah ayna sii wado cadaadiska diblumaasiyadeed inta wadahadalku socdo.
Previous articleDegdeg Gudoomiyaha guurtida somaliland oo ka hadley in lagu kala kacey shirkii jabuuti
Next articlePuntland oo qaadacday shirka Jabbuuti ee Somaliland iyo Soomaaliya